HARARE, Zimbabwe (AP) — The Latest on the death of former Zimbabwe leader Robert Mugabe (all times local): 9:30 p.m. U.N. Secretary-General Antonio Guterres says Robert Mugabe's "role in securing the independence of Zimbabwe and the fight against apartheid are key parts of his legacy."
Zimbabwe's President Robert Mugabe eats birthday cake during his 85th birthday celebrations in Chinhoyi, Zimbabwe. Mugabe, the longtime leader of Zimbabwe who was forced to resign in 2017 after a military takeover, has died at 95.
Robert Mugabe takes part in the Rhodesia conference in Geneva, jokingly puts up his fists as he encounters newsmen. Mugabe, the longtime leader of Zimbabwe who was forced to resign in 2017 after a military takeover, has died at 95.
Zimbabwean President Emmerson Mnangagwa addresses the nation at State House in Harare, Friday, Sept, 6 2019. Mnangagwa announced that former Zimbabwean President Robert Mugabe aged 95 died at a Singapore Hospital.
Zimbabwe President Robert Mugabe arrives for the burial of a prominent member of his party, Misheck Chando, in Harare. On Friday, Sept. 6, 2019, Zimbabwe President Emmerson Mnangagwa said his predecessor Robert Mugabe, age 95, has died.
Zimbabwe's President Robert Mugabe, center, arrives to preside over a student graduation ceremony at Zimbabwe Open University on the outskirts of Harare, Zimbabwe. On Friday, Sept. 6, 2019, Zimbabwe President Emmerson Mnangagwa said his predecessor Robert Mugabe, age 95, has died.
Zimbabwean President Robert Mugabe, left, shakes hands with Prime Minister Morgan Tsvangirai after he signed the new constitution into law at State house in Harare. On Friday, Sept. 6, 2019, Zimbabwe President Emmerson Mnangagwa said his predecessor Robert Mugabe, age 95, has died.
Former Zimbabwean President Robert Mugabe, left, and his wife Grace pose for a photo after a press conference at their residence in Harare. On Friday, Sept. 6, 2019, Zimbabwe President Emmerson Mnangagwa said his predecessor Robert Mugabe, age 95, has died.
Zimbabwe President Robert Mugabe, lights a flame at celebrations to mark 32 years of independence of Zimbabwe, in Harare. On Friday, Sept. 6, 2019, Zimbabwe President Emmerson Mnangagwa said his predecessor Mugabe, age 95, has died.
Leaders of the Black National Front Joshua Nkomo, left, and Robert Mugabe make a no progress statement after their informal meeting with British chairman Ivor Richard at the Palais of Nations, Geneva, Switzerland. On Friday, Sept. 6, 2019, Zimbabwe President Emmerson Mnangagwa said his predecessor Mugabe, age 95, has died.
Zimbabwean President Robert Mugabe clenches his fists as he delivers his speech at his party's 13th annual conference, in Gweru about 250 Kilometres south west of the capital Harare. On Friday, Sept. 6, 2019, Zimbabwe President Emmerson Mnangagwa said his predecessor Mugabe, age 95, has died.
Zimbabwean President Robert Mugabe during a meeting with South African President Jacob Zuma at the Presidential Guesthouse in Pretoria, South Africa. On Friday, Sept. 6, 2019, Zimbabwe President Emmerson Mnangagwa said his predecessor Robert Mugabe, age 95, has died.
Zimbabwean President Robert Mugabe addresses people at an event before the closure of his party's 16th Annual Peoples Conference in Masvingo, south of the capital Harare. On Friday, Sept. 6, 2019, Zimbabwe President Emmerson Mnangagwa said his predecessor Mugabe, age 95, has died.
The main entrance of the Gleneagles Hospital is seen in Singapore on Friday, Sept. 6, 2019. The Gleneagles Hospital in the wealthy Southeast Asian city-state of Singapore, where former Zimbabwe President Robert Mugabe has received treatment in recent years, sent a statement of condolence on his passing. The hospital would not confirm that he was being treated there at the time of his death.
According to U.N. spokesman Stephane Dujarric, the secretary-general will be sending a letter "offering condolences to the government and people of Zimbabwe" following Mugabe's death earlier Friday. Dujarric also noted Mugabe's "notable contributions" when chairing organizations such as the former Organization of African Unity and the Southern African Development Community.
He also said Mugabe was a regular participant in meetings and conferences at U.N. headquarters in New York. Dujarric said "the United Nations remains strongly committed to supporting Zimbabwe in its efforts to promote inclusive stability, sustainable development, democratic governance and human rights."